”Kaalaya soo arka Somalia!” – MW Farmaajo oo madaxda Afrika Muqdisho ku casuumey + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Kaalaya soo arka Somalia!” – MW Farmaajo oo madaxda Afrika Muqdisho ku...
”Kaalaya soo arka Somalia!” – MW Farmaajo oo madaxda Afrika Muqdisho ku casuumey + Sawirro
(Sochi) 24 Okt 2019 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay Shir Madaxeedka Ruushka iyo Afrika ayaa soo bandhigay fursadaha iskaashi iyo maalgashi ee haatan horyaalla labada dhinac.
Previous articleDAAWO: Qoyska MW Muuse Biixi oo lagu eedeeyay inay ”boobayaan” dhul ay dad danyar ihi deggan yihiin!!
Next articleSafaaradda Maraykanku ku leeyahay Nairobi oo markii ugu horreeysey si rasmi ah uga hadashay war aad la iskugu hayo oo ku saabsan dacwadda badda!